Global Voices teny Malagasy » Fidirana Amin’ny MSN Space ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2018 2:14 GMT 1	 · Mpanoratra Frank Dai Nandika imanoela fifaliana
Maro ny olona nilaza fa tsy afaka miditra amin'ny blaogy MSN Space-ny na miatrika fahasarotana amin'ny fidirana, ao anatin'izany i Nina Wu, anabavin'ilay blaogera voasambotra sady mpiara-miasa amin'ny Global Voices Hao Wu , miaraka amin'ny blaogera MSN maro nanamarina ilay olana (1 ,2 ).
Araka ity lahatsoratra ity , ao amin'ny Live.com  no mipetraka ny tsy fahafahana miditra amin'ny MSN Space. Navadiky ny Microsoft ho Live.com ny dingana fidirany .NET Passport  , izay nangataka an'ireo Sinoa mpampiasa mba handeha ao amin'ny live.com hanoratra ny mombamomban'ny kaontiny ary mety voasakana ao Shina ny Live.com. Noho izany, tsy afaka nidirana mihitsy ireo tranonkala rehetra nifandray tamin'ny MSN nandritra izay herinandro maromaro lasa izay.
Mampiseho zavatra roa ny fanandramana: voalohany, taorian'ny nampiasana ireo teknika teo ambony ireo mba hidirana amin'izy ireny, miverina amin'ny laoniny ny MSN sy ny Hotmail; faharoa, amin'ny alalan'ny proxy toy ny an'ny Tor  irery ihany no ahafahana miditra amin'ny Live.com.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/30/130986/
 Hao Wu: http://www.freehaowu.org/
 ity lahatsoratra ity: http://campuscn.blog.sohu.com/2753721.html
 .NET Passport: http://www.passport.net/
 an'ny Tor: http://tor.eff.org/